Somaliland: Mujaahid Cali Guray Oo Farriin Digniin Ah U Diray Garabka Guddoomiye Faysal Cali Waraabe. - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Mujaahid Cali Guray Oo Farriin Digniin Ah U Diray Garabka Guddoomiye...
Guddoomiye ku xigeenka saddexaad ee xisbiga UCID mujaahid Cali Guray ayaaa ka hadlay muddada ka hadhay in lagu qabto shirwaynaha xisbiga UCID ee ay gudida diwaan gelinta iyo ansixinta asxaabtu go’aamiyeen, waxaanuu sheegay inaanay wali wax kulan ah yeelan gudida loo xil saaray qaban qaabada shirwaynaha.
Bal ogaada toban maalmood ayaa tegay mudadii 45 cisho ahayd ee Shirwaynaha UCID loo qabtay marka beri lagu daro. Beri iska daa Guddi fadhiisata weli Gudoomiyuhu 5tii xubnood muu soo magacaabin mana soo wado .
Markaa waa qasab in beri aanu ka tashano talaabada ugu haboon ee dhinacayagu aanu qaadayno, Waxay noqon hadii Alleh yidhaa mid aanu jeclaysan doonin Gudoomiyuhu laakiin gar iyo dawba ah. Haduu tiisa wato isagaa noo xeeray LA ISU JOOJIN MAAYO. Ama ha ogolaado ama yuusan ogolaan eh hawlihii Shirka sidii aanu ku wadi karno ayuun baanu ku wadi si 35 maalmood ee hadhay aanu ugu dhamaystirno Shirwaynihina ku qabsoomo .
Hadii uu qabsoomi kari waayo masuuliyadda waxa iska yeelan doona Gudoomiyaha mana dhacayso mana aqbali doono UCID aan xisbi ahayn ee qof ah sharciguna ma ogolaan doono eh.